Tsime Rehudiki: NAD + & NMN seMuwedzera
/Blog/garari/I "Tsime Rehudiki": NAD + & NMN seAdvanced
Posted on 03 / 03 / 2021 by 阿斯劳 akanyora garari.
Kuburitswa kwezvakawanikwa nesainzi pamusoro pekuti NMN inowedzera sei iyo NAD mumitumbi yemakonzo yakarova mupepanhau nemusoro wemagazini, ichidaidza kuwanikwa kuti "Tsime rehuduku. "
Chidzidzo ichi chakataura kuti mbeva dzekare dzakave diki, dzakashinga, uye dzakatetepa kana dzapihwa mukomboni. Nekudaro, iwe unogona kudzosera kukwegura kwako nekutora iyo yekuwedzera. Kunyangwe iwe uchifanira kukurukura nezve chero zvinowedzerwa nachiremba wako.
History yeNMN uye NAD +
Nicotinamide adenine dinucleotide, kana NAD kwenguva pfupi, ndeimwe yemamorekuru akakosha uye akasiyana mumuviri. Nekuti iri pakati pekupa maseru nesimba, panenge pasina maitiro ehupenyu asingade NAD. Nekuda kweizvi, NAD ndiyo inotarisisa yekutsvagisa kwakawanda kwehupenyu.
Muna 1906, Arthur Harden naWilliam John Young vakawana “chinhu” mumvura yakabviswa pambiriso yomubiki yakawedzera kuvira kweshuga kuti ive doro. Iyo "factor", inonzi "coferment" panguva iyoyo, yakazove NAD.
Harden, pamwe naHans von Euler-Chelpin, vakaramba vachibvisa zvakavanzika zvekuvira. Vakapihwa mubairo weNobel muna 1929 nekuvandudza kunzwisiswa kwemaitiro aya, kusanganisira chimiro chemakemikari uye zvivakwa zvezvichakurumidza kuzivikanwa seNAD.
Nyaya yeNAD yakawedzeredzwa muma1930's, ichitungamirwa naOtto Warburg, mumwe mubairo weNobel, uyo akawana basa repakati reNAD ​​mukufambisa maitiro mazhinji emakemikari. Warburg yakaona kuti NAD inoshanda senge rudzi rweiyo relay relay yemagetsi. Kuendeswa kwemaerekitironi kubva kune rimwe mamorekuru kuenda kune rimwe, rinoshanda sehwaro hwesimba rinodiwa kuti riite maitiro ese emakemikari.
Muna 1937, Conrad Elvehjem nevamwe vaaishanda navo paUniversity yeWisconsin, Madison, vakaona kuti NAD + supplementation yakaporesa imbwa dzepellagra, kana "Rimi Rutema". Muvanhu, pellagra inokonzeresa kuwanda kwezviratidzo, zvinosanganisira manyoka, kuora mwoyo, uye maronda mumuromo. Inobva mukushomeka kweeniacin uye ikozvino inogara ichirapwa neNicotinamide, imwe yeanotungamira kuNMN.
Tsvagurudzo yaArthur Kornberg paNAD + mukati memakore makumi mana nemakumi mashanu 'yakamubatsira kuti awane misimboti yekudzokororwa kweDNA uye kudhindwa kweRNA, maitiro maviri akakosha pahupenyu. Muna 40, Jack Preiss naPhilip Handler vakafumura nhanho nhatu dzemakemikari, ayo nicotinic acid inoshandurwa kuita NAD. Iyi nhevedzano yematanho, inonzi nzira, inozivikanwa nhasi sePreiss-Handler Pathway.
Muna 1963, Chambon, Weill, naMandel vakashuma kuti nicotinamide mononucleotide (NMN) yakapa simba rinodikanwa kuti ishandise yakakosha enzyme yenyukireya. Uku kuwanikwa kwakarongedza nzira yezvinhu zvinoshamisa zvakawanikwa parudzi rweprotein inonzi PARP. PARPs inoita basa rakakosha mukugadzirisa kukuvara kweDNA, kugadzirisa kufa kwesero, uye chiitiko chavo chine chekuita neshanduko muhupenyu.
Muna 1976, Rechsteiner nevamwe vake vakawana humbowo hunogutsa hweNAD + hwakaita senge hungave ne "rimwe basa hombe" mumasero emammalia, kupfuura ayo echinyakare biochemical chinzvimbo sesimba rekutamisa simba.
Kuwanikwa uku kwakaita kuti zvive nyore kuna Leonard Guarente nevamwe vake kuti vaone kuti mapuroteni anonzi sirtuin anoshandisa NAD kuwedzera hupenyu nekusiyanisa zvakasiyana mamwe majini "akanyarara". Kubva ipapo, kufarira kwakakura muNAD nevari pakati, NMN neNR, nekuda kwesimba ravo rekuvandudza nyaya dzinoverengeka dzine chekuita nezera.
Wngowani Chikafu Chine NMN?
NMN inoitika zvakasikwa mune chikafu senge avocado, broccoli, kabichi, uye matomatisi. Zvino, iwe unogona kunge uchifunga: “Kana NMN ikawanikwa muchikafu, handikwanise here kuwedzera mazinga angu eNAD + nekudya zvimwe zvezvikafu izvi? “Mubvunzo wakanaka uye tinokukurudzira kuti udye kudya kunovaka muviri. Asi, heino nyaya:
Kunyangwe NMN ichiitika mune izvi zvekudya, iko kusangana kuri pasi pe1 mg pakg yechikafu. Mune mamwe mazwi, kuti uwane anenge 1mg yeNMN, iwe unofanirwa kudya inenge 1kg ye broccoli!
Izvo zvakawanikwa kuti kusimudzira iwo mazinga eNAD + muvanhu, iwo matanho eNMN anofanirwa kunge ari mumazana emamirigiramu padhizaini. Iyi nzira iri kumusoro kupfuura izvo zvatinogona kuwana kubva kuzvikafu zvedu, zvisinei kuti yakawanda sei broccoli yatinodya.
MUTSVENE ndiye nyanzvi yekugadzira NAD + & NMN seAdlement.
Nei uchiwedzera neNMN?
Sezvatakaratidza, NMN inoita basa rakakosha mukugadzira NAD +. Kana tave nezvikamu zvakakwirira zveNAD + mumiviri yedu, maseru esimba anowedzera ayo anova hutsi hwehupenyu - kupa simba nhengo yega yega uye sero mumiviri yedu nekutidzivirira kubva kukuvara kweDNA. NAD + zvakare inogonesa Sirtuin iyo yakakosha mukuwedzera tarisiro yehupenyu hwedu uye kudzikisira kudhara.
Kuwedzeredza neNMN kunowedzera zvinhanho zveNAD + mumiviri yedu, zvinopesana nekuderera kwechisikigo kunoitika patinokwegura. Tsvagiridzo yakaratidza kuti nekuwedzera neNMN, iyo NAD + nhanho mune vanhu vakura vanogona kukwidziridzwa kune iyo yemakore makumi maviri-ekuberekwa!
(1) Chii chinonzi Nicotinamide Adenine Dinucleotide (NAD +) neMabasa ayo?
NAD + yakakosha coenzyme inodikanwa kune hupenyu uye maseru mashandiro. Enzymes ndiwo makemikari anoita kuti kugadzirisika kwemakemikari omuviri kugoneke. Coenzymes ndiwo "mubatsiri" mamorekuru ayo maenzymes anoda kuti ashande.
NAD + ndiyo morekuru rakawandisa mumuviri kunze kwemvura, uye pasina iyo, muviri unofa. NAD + inoshandiswa nemapuroteni mazhinji mumuviri wese, senge masirtuins, ayo anogadzirisa DNA yakakuvara. Izvo zvakakoshawo kune mitochondria, inova dzimba dzemagetsi dzesero uye inogadzira simba remakemikari rinoshandiswa nemiviri yedu.
(2) Nzira dzekuwedzera NAD + nhanho
Kutsanya kana kudzikisa kudya kwecalorie, kunonyatso kuzivikanwa sekudzivirirwa kwekoriori, kwave kuchiratidzwa kuwedzera NAD + mazinga uye sirtuin chiitiko. Mumakonzo, iyo yakawedzera NAD + uye sirtuin chiitiko kubva kukoriyori kurambidzwa kwakaratidzwa kunonoka kukwegura. Kunyangwe NAD + iripo mune zvimwe zvekudya, iko kukosheswa kwakadzika kwazvo kuti kukanganise kuwanda kwemasenduru. Kutora zvimwe zvinowedzera, senge NMN, yakaratidzirwa kuwedzera NAD + nhanho.
(3) NAD+ Wedzera seNMN
Intracellular kuwanda kweNAD + kuderera kubva mukukwegura semazuva ese mashandiro emagetsi anopedza NAD + zvigadzirwa nenguva. Matanho ehutano eNAD + anofungidzirwa kudzoreredzwa nekuwedzera pamwe neNAD + vatangiri. Zvinoenderana nekutsvaga, vekutungamira vakaita seNMN uye nicotinamide riboside (NR) inoonekwa seyakawedzera ekugadzirwa kweNAD, + ichiwedzera kuwanda kweNAD +. David Sinclair, muongorori weNAD + anobva kuHarvard, anoti, "Kudyisa kana kupa NAD + zvakananga kuzvinhu hazvisi nzira inoshanda. Iyo NAD + mamorekuru haigone kuyambuka nyore nyore masero echipinda kuti apinde mumasero, uye nekudaro inenge isingawanikwe kuti igadzirise metabolism. Panzvimbo iyoyo, mamorekuru ekutanga kuNAD + anofanirwa kushandiswa kuwedzera mwero weNNAD + usingawanikwe. ” Izvi zvinoreva kuti NAD + haigone kushandiswa seyakananga kuwedzera, nekuti haisi nyore kupinza. NAD + vatangiri vanobatwa zviri nyore kupfuura NAD + uye zvinoshanda zvakanyanya zvinowedzera.
Chii chinonzi Nikotinamide Mononucleotide (NMN)?
Nicotinamide Mononucleotide (CAS:1094-61-7), inonziwo NMN, inova kongoni inowanzoitika iri muzvishoma mumuviri wemunhu pamwe nezvimwe zvekudya. NMN inowanika nemuromo, uye kana inotorwa nemuromo inogona kutsigira NAD + mazinga mukati mechiropa uye mhasuru tishu.
Ongororo ichangoburwa yakaratidza kuti NMN inogona kutsigira hutano hwemwoyo, kugadzirwa kwesimba, hutano hwekuziva, pamwe nehutachiona uye hutano hwepfupa. Imwe inonakidza kutsvaga kweNMN kutsvagisa ndeyekuti inogona kukurudzira kugadzirisa kweDNA uye kutsigira kumisikidzwa kwemaSIRTUIN majini ayo anofungidzirwa kuti anoita basa mukukwegura kune hutano.
※ NMN Inogadziriswa Sei MuMuviri?
NMN inogadzirwa kubva kuB mavitamini mumuviri. Iyo enzyme inoitisa kugadzira NMN mumuviri inonzi nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT). NAMPT inosungira nicotinamide (vhitamini B3) kune shuga phosphate inonzi PRPP (5'-phosphoribosyl-1-pyrophosphate). NMN inogona zvakare kugadzirwa kubva ku 'nicotinamide riboside' (NR) kuburikidza nekuwedzera kweboka re phosphate.
'NAMPT' ndiyo mwero-unodzivirira enzyme mukugadzirwa kweNAD +. Izvi zvinoreva mashoma ezasi eNAMPT anokonzera kuderera kweNMN kugadzirwa, zvichikonzera kudzikira kweNAD + nhanho. Kuwedzera mamorekuru ekutanga seNMN anogona zvakare kumhanyisa kugadzirwa kweNAD +.
Zvinogona Kubatsira zveNMN
Kamwe mukati memasero emhuka, NMN inodyisa mukugadzirwa kweNAD +, iyo inopa maseru simba rinodiwa uye inofungidzirwa kuve yakakosha mukukwegura kune hutano. NAD + inoitawo basa rakakosha mukumisa mapuroteni anochengetedza kutendeka kweDNA yedu. Yakapihwa iro repakati basa mune akawanda maseru maitiro, izvo zvinogona kubatsira zveNMN zvinowedzera kusvika kungangoita ese masisitimu emuviri. Pazasi pane mimwe mienzaniso inozivikanwa-iri nani.
❶ Inosimudzira Vascular Hutano uye Ropa kuyerera
Isu tinovimba nemhasuru yedu yemafupa yekufamba, kugadzikana uye simba. Kuti urambe wakasimba uye uine hunhu hwakanaka, tsandanyama idzi dzinofanira kutora huwandu hwakakura hweakakosha mamorekuru, seglucose nemafuta acids. Nekuti NAD + inodikanwa kuti ishandise mamorekuru aya, mhasuru dzedu dzinoda kugadzikana kwezvivakwa zvaro, seNMN.
Zvidzidzo mumakonzo zvakaratidza kuti NMN inodzivirira kurwisa kwakawanda-zvine chekuita nekukwegura muhutano, sekuomesa mitsipa yeropa, kushushikana kweiyo oxidative, kugona kwemasero edu ekuramba achipatsanura, uye kunyangwe shanduko mukushanda kwemajini edu, izvo masainzi anonzi jini kutaura.
❷ Inovandudza Tsitsi Kutsungirira uye Simba
Zvidzidzo zvakaratidza kuti mbeva dzakadyisa NMN kwenguva yakareba yaive nesimba remetabolism isina mhedzisiro yakajeka. Hutano hwemhasuru yedu inokura zvakanyanya kukosha apo isu patinokwegura uye yedu pachedu kupihwa kweNAD + kunodzikira.
❸ Inodzivirira Pachirwere Chemwoyo
Zvirinani kuti tsandanyama dzako dzemabhonzo dzinotora mabhureki. Kwete chete kuti moyo wako haugone kuzorora, haugone kana kunonoka kumhanya kwazvo pasina kukonzera matambudziko akakomba. Simba remwoyo rinodikanwa, nekudaro rakakura. Uye kuti irambe ichitekenyedza, inoda kugadzira iyo yese NAD + inogona. Ichi ndicho chikonzero masero emwoyo anoda kupihwa kwakatsiga kweNMN.
❹ Kunoderedza Njodzi Yekufutisa
Kufutisa kwakabatana neakawanda akasiyana mamiriro asina hutano uye zvinogona kunetsa kurapa. Iko hakuna mushonga uri nyore wekurema uye mamiriro ane hukama senge chirwere cheshuga uye metabolic syndrome. Nepo kugadziridzwa kwemararamiro senge kurovedza muviri kusingagumi uye kudya kunovaka muviri kuri kwakanyanya kukosha, zvishoma zvishoma zvinobatsira.
Muchidzidzo chegonzo, NMN inoratidza mhedzisiro inoteedzera maficha ekurambidzwa kwekoriori (CR). Kunyangwe CR yakaratidzirwa kupa akawanda mabhenefiti kukwegura uye hutano, iri rakaoma hutongi kuchengetedza kwenguva yakareba. Kufungidzira mabhenefiti ayo pasina kuomerera kune chakanyanya kudya kunenge kuri pasina mubvunzo kunobatsira.
❺ Kunowedzera Kugadziriswa kweDNA Kugadzirisa
Iyo NAD + yakagadzirwa kubva kuNMN inomutsa boka remapuroteni anonzi sirtuin. Sirtuins, dzimwe nguva inofungidzirwa sevachengeti vehutano hwedu, vanoita basa rakakosha mukuchengetedza DNA kuvimbika. Imwe nguva masero edu paanopatsanuka, iyo DNA kumucheto chaiko kwema chromosomes edu inokura padiki padiki. Pane imwe nguva, izvi zvinotanga kukuvadza majini edu. Sirtuin anononoka maitiro aya nekusimbisa iwo mabheti ekupedzisira, anozivikanwa nesainzi sematomere. Kuti uite, zvisinei, sirtuins vanovimba neNAD +. Zvidzidzo zvenguva pfupi zvakaratidza kuti kudyisa mbeva NMN dzakagadziriswa sirtuin uye kwakatungamira kune akanyanya kugadzikana telomeres.
❻ Inowedzera Mitochondrial Basa
Zvichitaurwa zviri nyore, hatina kugona kurarama tisina mitochondria. Aya akasarudzika maseru maseru anozivikanwa seimba dzemagetsi dzesero. Vanoshandura mamorekuru kubva kuchikafu chatinodya kuita simba rinoshandiswa nemasero edu. NAD + iri pakati peichi chiitiko. Muchokwadi, mitochondrial anomalies inokonzerwa nekurasikirwa kweNAD + inogona kutokanganisa kusagadzikana kwehuropi senge Alzheimer's. Zvidzidzo zvakaitwa mumakonzo zvakaratidza kuti NMN yekuwedzera yakanunura mamwe mitochondrial dysfunctions.
How LOng Does It Ta To See Ekukanganisa Of NMN?
AASrawNMN powder inowedzera huwandu hweNMN mumuviri wako mukati memaminitsi, nepo NAD + mazinga achiwedzerwa mukati memaminitsi makumi matanhatu. Nekudaro, kuti iyo NAD + itange kumutsiridza maseru ako, zvinowanzotora mavhiki mashoma.
Vazhinji vashandisi vanotaura kuti vanonzwa vadiki uye vakagwinya mukati memasvondo maviri kusvika matatu. Mabhenefiti akazara eNMN anogona kunzwika mushure memwedzi mishoma yekushandisa - asi unenge watonzwa musiyano mukati memavhiki mashoma!
Saka kana iwe uchida kuona shanduko mhedzisiro yeAASraw's NMN, iwe ikozvino wave nemukana wakasarudzika wekudaro. Uye chikamu chakanakisa? Haufanire kutora chero njodzi. AASraw's NMN yakafukidzwa nevimbiso yekugutsikana. Izvi zvinoreva kuti nekuti vane chokwadi chekuti uchada yavo NMN, ivo vakagadzirira kukupa iwe garandi.
Mativi Ekupedzisira eNMN Supplement
Nechero chipi zvacho chitsva kuwedzera, pane kunetsekana pamusoro pemhedzisiro. Parizvino, zvidzidzo zvesainzi hazvina kuratidza chero zvinokatyamadza kana mhedzisiro mhedzisiro yakabatana nekushandisa ichi chinowedzera.
Kunyunyuta kwakasimba chete nezve nicotinamide mononucleotide ndiko kusagadzikana mukubudirira, asi izvo zvinoitika mumatanho ari kusimukira ekuwedzera kwekuwedzera. Ehezve, iwe unofanirwa kubvunza chiremba wako nezve kutora iyi yekuwedzera, kunyanya kana iwe uri nepamuviri kana kuyamwisa.
Is NMN Better Than NAD +?
Kwemakore mazhinji, zvaifungidzirwa kuti maNAD + mamorekuru aive akakura kwazvo kuti atorerwe akananga uye aida kukwidziridzwa achishandisa chirevo chakadai seNMN. Munguva pfupi yapfuura, zvakawanikwa kuti NAD + inogona kuyambuka iropa-yechipingaidzo uye kusvika kune iyo hypothalamus kana ikatorwa zvishoma. Inogona kusimudzira NAD + nhanho mune ino gland iyo inobatsira muviri wese nekuti inodzora metabolism. Izvo zvinogona zvakare kuve mukana kuwedzera kubatsira avo vane kusagadzikana kwemagetsi nekuda kwekudzikira kweNAD + mazinga mu hypothalamus.
NMN, kune rimwe divi, inosimudzira maNAD + mazinga mumasero mumuviri wese uye iri nani chinongedzo chaunotora kutora kukwidziridza yako yakazara NAD + nhanho uye kunonoka kukwegura.
Nicotinamide mononucleotide (NMN) chinhu chechisikigo mumuviri wako chinokurudzira kugadzirwa kwechimwe chinhu chinonzi nicotinamide adenine dinucleotide. Ose maNMN neNAD anoita basa rakakosha mukudzivirira kukwegura. Zvikurukuru NAD, sezvo mukuru iwe waunowana, mashoma mukana muviri wako unofanirwa kuburitsa NAD. Ndipo apo iyo NMN yekuwedzera inogona kubatsira kubvira, kana ichidyiwa nemakonzo, inomutsa iyo NAD mumatumbu ezasi nekukasira.
Nekuda kweizvozvo, iyo yekuwedzera yakaumbirwa "tsime rehudiki", uye kukwegura kwemuviri kunodzikira uye kuzvidzosera pachezvayo. Kwete kungova nezvidzidzo zvakaratidza kushanda kweyekurwisa-kukwegura maitiro, asi iyo NMN yekuwedzera inogona zvakare kubatsira kudzivirira kana kurapa zvimwe zvirwere zvakaita segomarara, moyo neshuga. Muna 2016, boka remasayendisiti rakatanga kekutanga kiriniki yekudzidza nevanhu pane zvakanaka zvinoitika zve kutora NMN zvinowedzera. Kunyangwe kushanda kweNMN kuchiri mumatanho ekutanga, mimwe uye mimwe mishumo inosimbisa kugona kwekuwedzera.
Paunofunga kutenga NMN yekuwedzera pamhepo, ndapota verenga zvimwe zvinyorwa nezveNMN neNAD +. Iwe unofanirwa kuziva kana wakanakira muviri wako, unoshanda sei pamuviri wako, kana iwe uchiutora uye kuyerwa kweNMN, chero njodzi pauri. Weclome kuti utitevere kuti uwane zvimwe zvakawanda zveNMN mune ramangwana.
 Lautrup S, Sinclair D et al. 2019. NAD + muBongo Kukwegura uye Neurodegenerative Dambudziko. Cell Metabolism 30,630-655.
 Zhang, H., 2016. NAD + repletion inovandudza mitochondrial uye stem cell basa uye inovandudza hupenyu hwehupenyu mumakonzo. Sayenzi 352, 1436-1443.
 "NMN vs NR: Musiyano uripo pakati peaya 2 NAD + Precursors". www.nmn.com. Yakadzorerwa 2021-01-11.
 Imai, S., & Guarente, L. 2014. NAD uye sirtuin mukukwegura uye kurwara. Maitiro muCell Biology, 24 (8), 464-471.
 Kuruka, CK Lim, R. Grant, BJ Brew, uye GJ Guillemin. 2013. Serum Nicotinamide Adenine Dinucleotide Levels Kupfuura Chirwere Kosi muMultiple Sclerosis. Ubongo Res 1537: 267-272.
 Stipp D (Kurume 11, 2015). "Beyond Resveratrol: Iyo Anti-Kukwegura NAD Fad". Sayenzi American Blog Network.
 Prolla, T., Denu, J. 2014. NAD Kushomeka muZera-Yakabatana Mitochondrial Dysfunction. Cell Metabolism, 19 (2), 178-180.
 Fletcher RS, Lavery GG (Gumiguru 2018). "Kubuda kweiyo nicotinamide riboside kinases mumutemo weNAD + metabolism". Zvinyorwa zveMorecular Endocrinology. 61 (3): R107 – R121. doi: 10.1530 / JME-18-0085. PMC 6145238. PMID 30307159.
Maminitsi makumi matatu Kuti Uzive Nootropic Pramiracetam-AASraw
Zvese zvaunofanirwa Kuziva Nezve Pregabalin Maminitsi makumi matatu Kuti Uzive Nootropic Pramiracetam-AASraw